Waa In Gacanta Dhiig Loo Geliyo - Jamaahiirta Oo Farriin Adag U Diray Maamulka Chelsea Kaddib Guul-darradii Manchester United - Cadalool.com
Waa In Gacanta Dhiig Loo Geliyo – Jamaahiirta Oo Farriin Adag U Diray Maamulka Chelsea Kaddib Guul-darradii Manchester United
Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa codsaday in si degdeg ah shaqada looga caydhiyo tababare Maurizio Sarri, isla markaana aan lala sugin dhamaadka xili ciyaareedka.
Jamaahiirta Chelsea ayaa niyad-jab ka muujiyey guul-darrooyinka xanuunka badan ee kulamadii ugu dambeeyey loo xambaarinayey, gaar ahaan natiijada ciyaartii Manchester United ay kusoo booqatay Stamford Bridge oo ugu dhiibtay 2-0.
Tababare Sarri ayaa weji murugo ka muuqato garoonka dhexdiisa lasoo taagnaa, isaga oo fadhiga diiday, halka macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer uu farxad la dhoola-caddaynayey, isla markaana ciyaaryahannadiisa u tilmaamayey khidad ay kusii murgiyaan jamaahiirta Blues.
Kubbad uu naqshadeeyey Paul Pogba ayaa waxa shabaqa Chelsea ku hubsaday Ander Herrera, waxaana mid labaad oo uu xiddiga reer France ka dhiibtay khadka dhexe garabka midig kasoo jabiyey Marcus Rashford, waxaana madax qurux badan iskula daadiyey Paul Pogba.
Haddaba, taageereyaasha Chelsea ayaa intii ay ciyaartu socotay waxay farriin u direen mulkiilaha kooxdooda, waxaanay ka dalbadeen inuu shaqada ka caydhiyo tababare Sarri.
“Waa in dhiig gacmaha loo saaro Sarri haddii uu guuleysan waayo.” Sidaa waxa ciyaarta oo aan dhamaanin barta Twitterka kusoo qoray mid ka mid ah taageereyaasha Chelsea, hase yeeshee, mid kale ayaa soo raaciyey: “Ma jirto sabab uu ugu soo bilaabi waayey Hudson Odoi. Caloosha ayaa iga xanuuntay.”
Taageere kale oo isaguna ka cadhaysnaa xulashada tababare Sarri ayaa waxa uu soo qoray: “Mar walba murugo ayey noo tahay haddii aanu guuleysano ama khasaarno, sababtoo ah, Sarri wuxuu ku dhegsanaanayaa inuu odayaasha ka doorbido da’yarta.”
Taageere kale ayaa waxa uu isagana ka biyo diiday in safka koowaad ee Chelsea lagu soo bilaabo difaaca reer Spain ee Marcos Alonso, waxaana uu qoraal ku yidhi: “Marcos Alonso ayuu ku bilaabay, Maurizio Sarri madax xanuun ayuu caawa nagu riday kulanka Manchester United.”
Taageere kale ayaa waxa uu isaguna ku eedeeyey Sarri inuu ku mashquulsan yahay cabista sigaarka, waxaanu yidhi: “Saqajaanka maxaa ka khaldan, sigaarka ayuu si edeb daran u cabbayaa.”
Si kastaba ha ahaatee, tababare Sarri ayaa si buuxda u lumiyey kalsoonida taageereyaasha iyo maamulka naadigaba, waxaana la filayaa inay dhawaan soo baxaan go’aamo adag oo mustaqbalkiisa ku saabsan.